Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Australia » Agwaetiti ndị nwụrụ anwụ na -enweta nde 1.3
Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Ndị na -ahụ maka njikwa ọdụ ụgbọ mmiri Port Arthur (PAHSMA) emechala ọkwa ikpeazụ nke ọrụ dị oke mkpa iji belata mmetụta ndị ọbịa ma melite ohere ịbanye n'agwaetiti ama ama ama ama ebe njegharị ili na -ewu ewu.
Isle nke ndị nwụrụ anwụ, nke dina na mmiri nke Mason Cove, bụ ebe a na -eli maka ọdụ ntaramahụhụ Port Arthur n'agbata 1833 na 1877.
A na -eme atụmatụ na ihe karịrị mmadụ 800 a mara ikpe ka agbagoro n'agwaetiti a, ọkachasị n'ime ili na -enweghị akara.
Taa, ndị ọbịa n'àgwàetiti ahụ ka nwere ike ịhụ ihe ncheta ndị mara mma nke na -egosi ili ndị ọrụ agha, ndị ọrụ nweere onwe ha, ụmụ nwanyị na ụmụaka.
Njem nleta nke Obodo nke Ndi Nwuru Anwu etolitela site na ọrụ na akụrụngwa dị mma ka emebere atụmatụ nchekwa iji chekwaa agwaetiti ahụ na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ saịtị UNESCO World Heritage ma na -echebe ya n'okpuru iwu steeti Australia na nke gọọmentị etiti.
Onye njikwa nchekwa PAHSMA, Pamela Hubert kwuru, sị: “Ọrụ a na -enye usoro nlegharị anya na -aga n'ihu n'elu ala nke ga -eme ka njegharị Isle nke Nwụrụ Anwụ na -ewu ewu. Ejiwo nlezianya hazie ọrụ a iji hụ na mmetụta pere mpe na mpaghara ili ozu, ihe ndị dị na odida obodo, na echiche agwaetiti a. ”
Mazị Hubert kwuru, sị, "Ejikerela atụmatụ nke ọma wee rụọ ọrụ a na ọkwa ise iji hụ na enwere ike nweta ọrụ ahụ ebe a ka na -enye ohere ịbanye n'agwaetiti ahụ maka oge ndị ọbịa."
Ọrụ a bidoro na 2016, na ebumnuche iji belata mmetụta na mpaghara ili, melite nnweta, na ịkwalite ahụmịhe onye ọbịa. Emere ọkwa nke mbụ nke oru ngo a site na enyemaka nke $ 80,000 site na mmemme nchekwa saịtị gọọmentị nke Commonwealth.
PAHSMA na otu ụlọ ọrụ Tasmanian na ndị ndụmọdụ na-ahụ maka akụkụ dị iche iche nke ọrụ ahụ: Sue Small Landscapes n'ịmepụta ụzọ ụkwụ, Pitt na Sherry maka ndụmọdụ injinia nhazi, Saunders na Ward maka ịkpụpụta nchara na nrụnye saịtị, na Abrasive Mgbawa na eserese maka agba ọkachamara emechaala. Mgbe ya na Osborne Aviation na -arụkọ ọrụ, PAHSMA enweela ike iji helikọpta na -ebuli ihe n'agwaetiti ahụ nke mere ka ọrụ ahụ dị ngwa ngwa.
“Ụzọ ndị a na -aga n'ụzọ ọ bụghị naanị na -abawanye ohere site na iji steepụ dochie steepụ, ha na -emekwa ka ahụmịhe ndị ọbịa nwee usoro nlele ka mma yana ohere ikpokọta maka njegharị. Ọ dị mkpa ịnakwere na agwaetiti ahụ ka bụ ebe izu ike nke ihe dị ka mmadụ 1,000 na ọrụ a na -egosi nkwanye ùgwù anyị na -aga n'ihu maka agwaetiti ahụ dị ka ebe a na -eli ozu na ebe ịtụgharị uche, "Onye njikwa ihe ọmụmụ PAHSMA Dr. David Roe kwuru.
Ebe akụkọ ihe mere eme nke Port Arthur, yana Cascades Female Factory Site, saịtị akụkọ ihe mere eme nke Coal, ọdụ nnwale Darlington na agwaetiti Maria, na Brickendon na Woolmers Estates, nwere akaụntụ maka saịtị 5 n'ime iri na otu nke nwere ihe njikwa ihe nketa ụwa nke Australia.
Nwada Hubert kwuru, "Nke a bụ nnukwu ihe dị mkpa na nchekwa nke Isle nke Ndị Nwụrụ Anwụ." "Obi dị anyị ụtọ na anyị arụchaala ọrụ a yana yana mmepe nke akụkọ ihe mere eme na nkọwa ọhụrụ na Cascades Female Factory na -emepe na mbido 2022, na -egosi ntinye aka PAHSMA n'ịhụ na a na -ekerịta akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ nke akụkọ ikpe Australia anyị."
Isle nke ndị nwụrụ anwụ bụ ebe ndị niile nwụrụ n'ime ogige ụlọ mkpọrọ ahụ na -aga. Ọ bụ obere agwaetiti dị n'akụkụ Port Arthur, Tasmania, Australia. Mgbe ọnwụ nke mmezi Port Arthur na 1877 gasịrị, emechiri ebe ili ozu, wee ree agwaetiti ahụ ka ọ bụrụ ala nkeonwe. Kemgbe ahụ ka emezigharịrị ya ma gọọmentị Tasmanian na -elekọta ya.
Ịdị njikere maka ọdachi ndị na -emere onwe ha: Mbụ na ...